China Waste Plastic Pyrolysis Plant fekitori uye vagadziri | LYBH
Pretreatment system (yakapihwa nemutengi)
Mushure mekunge mapurasitiki eparara asisina mvura, akaomeswa, akapwanywa, uye mamwe maitiro, vanogona kuwana saizi yakakodzera.
Mapurasitiki epamberi akambotakurwa anoendeswa kubhinji yekuchinja.
Inoenderera pyrolysis system
Mapurasitiki marara anoramba achidyiswa mupyrolysis reactor kuburikidza neye feeder ye pyrolysis.
Mafuta anopisa anonyanya kushandisa gasi risingakundike rinogadzirwa ne pyrolysis yemarara mapurasitiki, uye iyo yepamusoro-tembiricha flue gasi inogadzirwa inosanganiswa neyakagadziridzwa flue gasi kuti ipe iyo inodikanwa kupisa.
Oiri uye gasi kutonhora kupatsanura system
Mushure mekunge mafuta negasi zvichibva muyakaenderera pyrolyzer zvadzikiswa uye zvaparadzaniswa, mafuta emafuta anopinda mutangi rekutora oiri otakurwa kuenda kunzvimbo yetangi nepombi yemafuta, uye gasi risingakundike rinopinda rinopisa gasi rekuchenesa gasi.
Inopisa gasi yekuchenesa system
Iyo gasi rinotsva rinowanikwa kubva ku pyrolysis rinonatswa neinotsva gasi yekuchenesa system uye ndokuunzwa mune yekumanikidza inosimbisa tangi pasi pechiito cheiyo yekumanikidza yekudzora chishandiso kuburikidza nemvura yekuisa chisimbiso tangi.Iyo isingadzikisike gasi mushure mekucheneswa inotumirwa kune iyo inopisa unit, uye iyo kupisa kunogadzirwa nemoto kunoshandiswa kune iyo pyrolysis yemarara matai.
Solid mafuta kugadzira system
Iyo yepamusoro-tembiricha yakasimba zvigadzirwa zvinogadzirwa neyakaenderera pyrolysis gasi inoendeswa kune yakasimba chigadzirwa silo neanotakura mushure mekutonhora kune yakachengeteka tembiricha neakawanda-epanzvimbo mvura kutonhora.
Flue gasi yekuchenesa system
Mushure mekudzokororazve chiutsi gasi chadzikama, icho chinopinda muguruva uye hwema kubvisa shongwe uye flue gasi yekuchenesa shongwe. Mushure mekuchenesa kwakasiyana-siyana, senge plasma yemagetsi munda guruva kubvisa system uye UV kunhuhwira kubvisa system, inosvika pachiyero chekubuda.
Iyo yekugadzira tambo inotora PLC / DCS yekudzora sisitimu uye kuongorora kutapurirana kwedatha mugore kuti riite chaiyo-nguva yekutarisa pane yega node uye kuitumira iyo kubva kune gore kuenda kunyaradzo. Iyo yekudzora poindi inogona kuona yakachengeteka kutsemuka kweakangwara marara tire.At panguva imwecheteyo, mashandiro e data kutora, kuverenga, kurekodha, kudhinda mushumo mafomu uye chengetedzo pre-kugadzirwa kuve nechokwadi chekuchengetedza, kugadzikana uye kuenderera kushanda kweyekugadzira mutsara.
1.Automatic inoenderera kugadzirwa, tekinoroji yepamberi, mhando yakanaka yemafuta;
2.Fully otomatiki, yakakwira tembiricha, yakavharwa slag, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye yakachena isina guruva.
3.Iyo yakasarudzika anti-tsvimbo yemadziro mudziyo inogona kuona kuenderera kugadzirwa kweakakosha mbishi zvigadzirwa.
4.Kukura kwekubata kugona, zuva nezuva kubata kugona kusvika kumatoni 50-100 Pasina mafuta, gasi risingakundike rinogadzirwa ne pyrolysis rinodzoserwa kutsigira kupisa.
5.Environmental dziviriro uye hapana kusvibiswa, (inogona kusangana neyakajairika yengozi kurapa marara) yenyika patent desulfurization guruva, bvisa guruva muutsi hweasidhi gasi uye guruva.
6.Easy kushanda uye chengetedza basa.
Inoenderera pyrolysis chirimwa
Waste matai, marara marara, marara epurasitiki, marara acrylic, sludge, imba marara
Kugadzirwa kwemafuta kwemaawa makumi maviri nemana
1. Iyo Raw Zvinyorwa ZvePyrolysis Machine
2. End chigadzirwa muzana uye mashandisiro
3.Iyo inowanika mafuta ekugadzirisa pyrolysis
Aihwa. Type Goho remafuta
1 PVC / PET Haugone kunatsa
5 Tambo yepurasitiki 80%
7 Bhegi repurasitiki 50%
a. Kugamuchira otomatiki akanyudzwa-arc yekutengesa tekinoroji
b. Yese simbi yekutsvaira ichaonekwa neiyo ultrasonic isina kuvandudza nzira yekuyedza kuverengera iwo mhando yemhando uye iyo Welding chimiro.
c. Kugamuchira kugadzira maitiro ekudzora system pahunhu, yega nzira yekugadzira, zuva rekugadzira, nezvimwe.
d. Yakashongedzerwa neanti-kuputika chishandiso, mavharuvhu ekuchengetedza, mavharuvhu ekukurumidzira, kumanikidza uye tembiricha metres, pamwe neyakavhundutsa system.
a. Emission Standard: Kugamuchira yakakosha gasi zvinotsvaira kubvisa acid gasi uye guruva kubva muutsi
b. Hwema panguva yekushanda: Yakapoteredzwa zvizere panguva yekushanda
c. Kushatiswa kwemvura: Hapana kusvibiswa zvachose.
d. Kusviba kwakasimba: iyo yakasimba mushure me pyrolysis ndiyo isina kuchena kabhoni nhema uye simbi waya dzinogona kuve dzakadzika-kugadziriswa kana kutengeswa zvakananga nekukosha kwayo.
1.Quality garandi nguva: Rimwe gore garandi yeiyo huru reactor yemipirrolysis michina uye yehupenyu kugadziriswa kweiyo yakazara seti yemachina.
Kambani yedu 2.Our inotumira mainjiniya ekumisikidza nekumisikidza munzvimbo yemutengi kusanganisira kudzidziswa kwehunyanzvi hwevashandi vemutengi pakuvhiya, kugadzirisa, nezvimwe.
3. Kupa marongero zvinoenderana nemusangano wemutengi uye ivhu, ruzivo rwevashandi vehurumende, zvinyorwa zvekushanda, nezvimwewo kumutengi.
4. Nekukuvara kwakakonzerwa nevashandisi, kambani yedu inopa zvikamu uye zvishandiso nemutengo wemutengo.
5. Fekitori yedu inopa izvo zvakapfeka zvikamu nemutengo wemutengo kune vatengi.
Pashure: Imba yemarara pyrolysis chirimwa
Zvadaro: Inoenderera Tsvina Tire Pyrolysis Miti
30-40tpd Pyrolysis Inoenderera Yekushandisa
Otomatiki Pyrolysis Midziyo
China Waste Matai Anoramba Achienderera Pyrolysis Midziyo
Kuenderera mberi kweTire Pyrolysis Miti
Inoenderera Tsvina Tire Pyrolysis Midziyo
Pyrolysis Midziyo Bjl5-30tpd Chinese
Pyrolysis Midziyo yeTire
Tire Kudzokorodza Sisitimu
Tire Recycling to Fuel
Tire Reyccling Midziyo
Yakashandiswa Tire Pyrolysis Midziyo
Tsvina Rubber Pyrolysis
Waste Tire Kudzokorodza Sisitimu
Waste Kurapa Midziyo
Waste Tire / Rubha Dzokorodza Pyrolysis Midziyo
Tsvina Matai Anoramba Achienderera Pyrolysis Midziyo Chinese Kugadzira
Tsvina Matai Pyrolysis Michina Machina
1. Vhura zvakakwana musuwo: inokasira uye inomhanya kurodha, kutonhora nekukurumidza, nyore uye nekukurumidza waya kunze. 2.Kutonhodza kwakazara kweiyo condenser, yakakwira mafuta kuburitsa mwero, wakanaka mafuta mhando, hupenyu hurefu hwebasa uye kuchenesa nyore. 3. Yekutanga yemvura modhi desulfurization uye kubvisa guruva: Inogona zvinobudirira kubvisa acid gasi uye guruva, uye inosangana inoenderana yenyika zviyero. 4. Kubvisa kubviswa pakati pegedhi remoto: isina mweya, otomatiki deslgging, yakachena uye isina guruva, yekuchengetedza nguva. 5. Kuchengetedza: automati ...
Ichaputswa zvidimbu zvetaya mushure mebhandi rekutakura, bhanhire chikero, sikuruu conveyor, nezvimwewo kune yakashata kumanikidza mune inoenderera pyrolysis sisitimu kuburikidza ne pyrolysis, mune system mushure megesi chikamu chekuita tembiricha 450-550 ℃ pasi pemamiriro ekutsvaira nekukurumidza pyrolysis maitiro, gadzira iyo pyrolysis mafuta, kabhoni nhema, waya wepyrolysis uye gasi rinotsva, gasi rinotsva nekuparadzaniswa kwemafuta uye gasi yekudzosa unit mushure mekupinda mune inopisa kupisa kwebhiza kupisa, kune iyo yese producti ...
Product Detail: Kuenderera mberi kwekuparadzanisa tiravira, inozivikanwawo seU-mhando kupaza vira, yakagadzirirwa mafuta sludge mafuta jecha uye sewage kurapwa chirimwa sludge, chikuru choto chakakamurwa kuita zvikamu zviviri: yakaoma chiravira, carbonization choto. Izvo zvinhu zvinotanga kupinda muchoto chekuomesa, yekutanga kuomesa, iyo yemvura yemvura inoputika, uyezve inopinda mukati mekabhoni ichibvarura, iyo yemukati yemvura kunaya, uyezve iyo yakasara yakajairwa kubuda, kuti uwane inoenderera ...
Product Detail: Pretreatment system (yakapihwa nemutengi) Mushure mekurasa mapurasitiki, akaomeswa, akapwanywa, uye mamwe maitiro, vanogona kuwana saizi yakakodzera. Kudyisa sisitimu Iyo yepamberi yemarara mapurasitiki inoendeswa kune yekuchinja bin. Inoenderera pyrolysis system Iyo marara mapurasitiki anoramba achiiswa mukati meiyo pyrolysis reactor kuburikidza neye feeder ye pyrolysis. Kuchenesa sisitimu Iyo yekudziya mudziyo mafuta inonyanya kushandisa isinga-gundurike gasi rinotsva rinogadzirwa ne pyrolysis yeaka ...
Batch Pyrolysis Chirimwa, Inoenderera Pyrolysis Miti, Plastiki Recycling Machine, Waste Tire Kudzokorora Muchina, Dongo Mapurasitiki Refinery, Tire Pyrolysis,